Ungayifaka kanjani i-Linux kusuka ku-USB pendrive | Kusuka kuLinux
Ungayifaka kanjani i-Linux kusuka kwinduku ye-USB
Lo myalo usetshenziselwa ukufaka noma iyiphi i-distro nge-USB. Ngaphezu kwalokho, ilusizo ikakhulukazi kulabo abaphethe ama-netbook ngakho-ke abakwazi ukusebenzisa i-LiveCD ukufaka iLinux.
Ngokuyisisekelo, esizokwenza ukusebenzisa uhlelo oluncane olubizwa UNetBootin, enezinguqulo zeLinux neWindows.
Landa isithombe se-ISO se-distro okukhulunywa ngayo.
Landa i-UNetBootin. Ku-Ubuntu, kulula uma uyifaka usebenzisa iSynaptic.
Qalisa i-UNetBootin kusuka ku-Applications> System Tools.
Khetha isithombe se-ISO esilandiwe esinyathelweni 1 njengomthombo.
Khetha idrayivu ye-USB njengendawo oya kuyo
Yamukela futhi uyilinde ize iqede (kungathatha imizuzu embalwa)
Qala kabusha ikhompyutha, lungiselela i-BIOS ukuqala nge-USB.
Ngale ndlela, awugcini ngokugcina ama-CD / ama-DVD ukuthi ubuzophoqeleka ukuthi ushise ngaphambilini, kepha ungahlola wonke amasistimu wokusebenza ngaphandle kokusula iota yedatha egcinwe kukhompyutha yakho. Ukungasho lokho isebenza ngokushesha okukhulu ukuthi uma siqale uhlelo ku-LiveCD / DVD.
Ukubuyisa i-USB yakho, Kunconywa ukuyifometha, kepha akuyona imfuneko engenakulinganiswa, ukususa wonke amafayela akopishwe yi-UNetBootin kwanele. 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ungayifaka kanjani i-Linux kusuka kwinduku ye-USB
U-Andres Westra Ureña kusho
Inkinga encane, ngikwenze konke okungenhla ngizama ukufaka uKubuntu 12.10 ku-usb. Futhi wangitshela ukuthi kuyasebenza. Kepha uma ngivula i-pc ngithola iphutha le-boot. U-Al .iso usevele usiqinisekisile isamba se-md5. Futhi i-BIOS isivele ilungiselelwe ukuqala i-usb. Kepha noma nini lapho ngizama, ngithola iphutha le-Boot.
Ngizamile ukubhutha ubuntu nge-usb futhi uma kuyasebenza.
Phendula u-Andres Westra Ureña
Uzwa noma iyiphi ividiyo ongayishiya?
Ngine-fedora kwidiski futhi angazi noma ngingayisebenzisa yini ukuyibeka ku-usb
U-Edgar Amarilla kusho
Ngithola iphutha lapho ngifaka .. ithi "isithombe se-kernel esingalungile noma esonakele" futhi ingabe ubuntu engifuna ukusifaka ... lukhona usizo? okumele ngikwenze?
Phendula u-Edgar Amarilla
Kwenzeka ngokufana ncamashi. okwamanje ngakha i-usb eboshiwe ngolunye uhlelo (lili) ukubona ukuthi kuthuthukisa okuthile. Ngabe kukhona ongangitshela ukuthi kungani lokhu kwenzeka noma ukuthi kungaxazululwa kanjani, uma kwenzeka uLili engenzi njalo?
Kwenzeka okufanayo nakimi.
UJuan Pablo Mayoral kusho
ahhhh kuhle! Bonga kakhulu !!! Halala!
Phendula uJuan Pablo Mayoral
Indlela elula yokusebenzisa i-unetbootin ukulanda ifayela le-ISO le-distro ofuna ukulisebenzisa "ngesandla". Okusho ukuthi, iya ekhasini le-Linux Mint, landa i-ISO oyithanda kakhulu futhi, uma isiqedile ukuyilayisha, sebenzisa i-Unetbootin ukudala i-Live USB ngalelo fayela le-ISO olilande ngaphambili.
Sawubona, ngifuna ukufaka i-linux mint 13 kusuka ku-pendrive kepha ukusatshalaliswa akuveli ku-unebootin ...
i-unetbootin yehlulekile isikhathi eside: S
ILubuntu iyindawo enhle!
Impela uzoba mkhulu.
Ngiyabonga! Kulungisiwe !. 🙂
Ngizoyihlola nge-Debian, ibukeka yinhle. Ngendlela, isinyathelo 5 asilungile, isithombe silandwe kusinyathelo 1, hhayi ku-2. Ngaphezu kwanoma yini, ngoba mhlawumbe kukhona omunye omusha owenza uhlanya ngalezi minutiae.
Sawubona, kuthiwani uma ngifuna ukususa wonke amafayela bese ngithola i-linux?
Ungakhohlwa ukuthi i-pendrive kufanele uyifomathe njenge-FAT32 uma uyiyeka njenge-NTFS ayikusebenzeli
Iqiniso ukuthi angazi ukuthi kungani uthola lelo phutha.
Mayelana nelinye iphuzu, ngicabanga ukuthi umyalezo owutholayo lapho uphuma kuLubuntu ujwayelekile, ngoba uthatha ngokuthi usebenzisa i-CD efana ne-LiveCD hhayi i-pendrive. Okufanele ukwenze ukukhipha i-pendrive bese ucindezela ukungena.
sawubona, ngidinga usizo, ngizamile i-unetbootin kusukela ku-ubuntu 12.04 ukubona ukuthi i-lubuntu ibukeka kanjani. Ngikuthandile futhi ngazama ukuqedela ukufakwa, kepha nginezingxenye eziningi kudiski yami, ngakho-ke bengingakwazi, futhi manje ayingivumeli ngiqale ubuntu ingitshela ukuthi kufanele ngiqale ikhenela phambilini, ngingangena kuphela esivivinyweni se-lubuntu, esingangeni kuso Ngingenza noma yini.
Angiqondanga lutho Juan! Qala ikhenela? Yiliphi iphutha elikuphonsa? Kukumuphi umongo? Thuthukisa inkinga kangcono ukubona ukuthi singakusiza yini.
Sawubona, ngiyabonga kakhulu ngempendulo esheshayo enjalo.
Iqiniso ngukuthi ngizamile i-unetbootin nge-lunubu, futhi lapho ngivuselela uhlelo ukuthi ngingene kubuntu, aluzange lungivumele ngingene kulo, lwathi: "udinga ukulayisha iphutha le-kernel kuqala".
Enye into engabaluleka futhi ukuthi uma ngiphuma ku-lubuntu ithi kimi "ngicela ususe imidiya yokufaka ngaphakathi bese uvala ugqoko (uma lukhona) bese ucindezela u-enter", futhi angazi ukuthi ngenzeni.
Ngiyabonga kakhulu ngosizo lwakho nangebhulogi yakho.
Angizange ngiyenzele i-USB noma i-CD kodwa ngqo kusuka kwi-hard disk, ingivumela kuphela ukuthi ngifake idemo ye-lubuntu namawindi. Unondindwa ngokuphelele, ngoba bengingavunyelwe ukwenza noma yini.
Engikwenzile ekugcineni ukufometha kusuka ku-windows ukwahlukanisa lapho ngangine-ubuntu (ngilahlekelwe yizo zonke izinhlelo, amakhasi agciniwe nokunye) ngafaka i-lubuntu zisuka nje.
Isonto elixubile kodwa ngiyethemba ukuthi u-lubuntu uzongenzela kahle.
Ngiyabonga kakhulu ngosizo nokunakwa
Sawubona! Siyabonga ngokuchitha isikhathi kulezi zihloko.
Mayelana nalokho engingalutholanga usizo, noma ekhasini le-UNetbootin, kumayelana nesimo lapho i-usb ingaba khona ngaphambili, ake ngichaze, kwenzekani uma isigamu sayo sesivele sinedatha kepha omunye efuna ukusebenzisa enye ingxenye ukubeka i-distro oyifunayo? Uma lokho kungenzeka, umuntu angahamba kanjani ngokufinyelela idatha? noma ukuqhuma kwe-distro efakiwe kuzobangelwa noma nini lapho kuxhuma?
Lapho ukusatshalaliswa kwe-linux kufakwa ku-usb futhi ngabe kudala ukwahlukaniswa kwe-boot, swap kanye nekhaya? Ungayisebenzisa i-usb enkulu, ithi i-8 Gb noma i-16 Gb, kuma-distros amabili usebenzisa uhlelo olufanayo?
Okokugcina, futhi nje ngenxa yelukuluku ngoba uManjaro usevele unesiqondisi sakhe, kungani i-UNetbootin ingasebenzeli iManjaro? 🙂 Okungenani ngilinde impendulo yombuzo wokuqala, ngiyabonga.
U-Elhuerto Delfer kusho
imanjaro ayikwazi ukusebenzisa le ndlela, i-dd iyasetshenziswa noma ishiswe nombhali wesithombe
Phendula u-Elhuerto Delfer
i-tonny crl kusho
Uma nginawo amanye amafayela agcinwe ku-USB, ingabe kufanele ngiwasuse noma ngingakwazi ukugcina isithombe ngaphandle kokufometha i-USB?
Phendula ku-tonny crl
Cha. Kufanele wenze okushiwo yilo mbhalo. Akukho okunye.
sawubona ngemuva kokwenza i-usb bootable, ukuze ivule amafayela kufanele ngivule uziphu isithombe se-linux?
Ukube bekulula kanjalo, ubungeke udinge i-Unetbootin.
Lokho okwenziwa yilolu hlelo ukudala amafayela wokumisa amaningana ngokuzenzakalela ukuze ukwazi ukuqala uhlelo ngaphandle kwezinkinga.
Uma ngabe unentshisekelo, ngincoma ukuthi uvakashele amakhasi alandelayo: http://unetbootin.sourceforge.net/ http://es.wikipedia.org/wiki/UNetbootin
futhi kungenziwa ngokuvula uziphu esithombeni ku-usb eqondile (okwenziwe ngaphambilini)… ngaphandle kokusebenzisa i-UNetBootin?… (kusobala ukumisa ibhuthi kusuka ku-usb)…
Ngabe i-UnetBootin yenzani ngempela ku-pendrive? ngaphandle kokukopisha amafayela kusuka kusithombe se-unzipped ...
Sawubona. Angikwazi ukufaka i-Unetbootin noma ivela eSynaptis noma kuwebhu. Ngithola umyalezo wephutha maqondana nefayela into enjengale> 4.3.3
Ngithola le nkinga ngaso sonke isikhathi lapho ngivula i-usb:
I-SYS LINUX 4.07 EDD 2013-07-25 Copyright (C) 1994-2013 H. Peter Anvin et al
Ngizamile izinhlelo ezingama-300 ezahlukahlukene ukufaka ukusatshalaliswa kwe-.iso ku-USB futhi ngithola iphutha kuzo zonke. Ngine-Acer Aspire One futhi angikwazi ukufaka i-linux kepha ine-USB.
Ngibheke imininingwane kule webhusayithi:
Futhi ayixazululi inkinga nakimi.
Bheka, into ephephe kunazo zonke ukusebenzisa umyalo we-dd kusuka esigungwini ukudlulisela i-ISO kusendlalelo, kulula ukulandela izinyathelo http://aprenderconlibertad.blogspot.com/2014/06/crear-facilmente-un-pendrive-booteable.html
Ngiyabonga kakhulu ngosizo .. ngikwazile ukulifaka ngaphandle kwezinkinga ..
umfana omuhle ngigcine ngimtholile ngiyabonga
Ingabe lona ngumbuzo webanga lokuqala / wasenkulisa ovela ku-neophyte?
1) Angazi ukuthi i- "ISO" iyini / isho ukuthini
2) Ngabe isibuko / isithombe esibhakabhakeni kufanele sehliswe?
3) Yini i- "unetbootin"? ….
I-SYSLINUX 4.07 EDD 2013-07-25 Copyright (C) 1994-2013 H. Peter Anvin et al
IPHUTHA: Alikho ifayela lokumisa elitholakele
Asikho isiqondisi sokumiswa kwe-DEFAULT noma se-UI esitholiwe!
Ngizamile izincomo ezahlukahlukene, futhi ayisebenzi ku-Olidata L51II0 ene-80 GB disk ne-1Gb RAM.
Ngiphinde ngafometha idiski njengangaphandle kwe-Ubuntu ukuze kutholakale izingxenye ezintathu ze-linux, kepha naaa… le nto ingibolile… Ngabe kukhona owaziyo ukuthi angakulungisa kanjani ukuqeda ukufakwa kwe-USB kwe-ubuntu 12.04?
ukuzama ukukwenza kusuka kudiski kimi laphonsa iphutha elifanayo kepha lapho ngiliqala kudiski UMA LANGISEBENZELA
Kulungile. Ngimusha impela kulokhu. Angikaze ngifake amawindi ngokwesibonelo nangaphansi kwe-ubuntu 14.04. Engifuna ukukwenza ukuvivinya ubuntu 14.04 kusuka ku-pendrive. Inkinga ukuthi ngaphambi kokuzama, angizange ngiyiqonde imiyalo. Ngilayishe i-UNetBootin yama-windosws ngayigcina epeni kanye nesithombe se-iso se-ubuntu 14.04. Umbuzo uthi olandelayo, ngabe kufanele ngenze enye into ngaphambi kokuthi ngiqale ukuhlola ubuntu kusuka kumqashi, noma ngezinhlelo ezilayishwe ngaphandle kokufaka, ngingaqala kahle?
umngani ukuqala i-unetbooting kufanele uyifake kukhompyutha yakho bese ungayidlulisi ku-usb yakho ngoba lokhu akusizi ngalutho ... faka i-unetbooting kukhompyutha yakho ngemuva kwalokho ngezansi khetha isithombe se-iso bese ubheka isithombe se-iso esasikade silandiwe futhi sagcinwa ku i-pc bese uchofoza ku-ukudala bese u-voila uhlelo lokuqalisa kabusha luzokwenza konke lapho likucela ukuthi uqale kabusha ulunikeza ukwamukela nokulungiselela ikhompyutha yakho ukuqala nge-usb futhi yilokho kuphela.
UCarlos Contreras kusho
Ubusuku obuhle, uxolo, ngisha kulokhu.
Ngine-Windows 7 pc futhi sengivele ngiyikhokhela ukuthi ifomethwe ngenxa yamagciwane.
Ngokusobala elinye igciwane layifaka ngoba ayingivumeli ngixhumeke kunethiwekhi ye-Wi-Fi ekhaya.
Ungangiluleka ukuthi ngenze i-usb ebhuthayo bese ngifaka iLinux
Phendula ku-carlos contreras
Ngikisela ukuthi ufunde "umhlahlandlela wabaqalayo" wethu.
Nginenkinga lapho ngisebenzisa i-kali linux kusuka ku-usb lapho ngilayisha ngithola i-syslinux 3.86 2010-04-01 EBIOS Copyright (C) 1994-2010 H. Peter Anvin et al
futhi lapho akwenzeki lutho noma ngisusa noma ngifaka i-usb ayilayishi kufanele ngilinde ibhethri ukuthi iphele ukuze isebenze ngamawindi ungangithumela i-imeyili ku e103746156po@hotmail.com I-gracias
Kwenzeka into efanayo nakimi, ukwazile ukuxazulula inkinga?
U-Alexander Z. kusho
Ungayixazulula, ingabe yenza okufanayo nakimi?
Phendula u-Alejandro Z.
Inkinga ukuthi isebenzise ukungabhali futhi emibhalweni ye-kali linux ithi kufanele kube ngolunye uhlelo engingakhumbuli ukuthi lubizwa kanjani kepha ungabuka ikhasi elisemthethweni le-kali linux
UCarlos Torres kusho
Ngithole lolu lwazi lusizo impela, ngiyabonga.
Phendula uCarlos Torres
Ngenzenjani lapho u-ISO KERNEL engitshela ukuthi ngenzeni?
Nginenkinga, ngabe othile angangisiza, nginohlelo lokusebenza lwe-linux 4.0 futhi ngifuna ukuligcina kwimemori ye-usb.
UDiana Rojas kusho
Angikwazi ukufaka i-linux. Sengivele ngizamile zombili nge-ubuntu nange-linux mint enguqulweni engu-64-bit no-32-bit. Esifakeni angikaze ngithole isikrini ngenketho yokufaka kanye nolunye uhlelo lokusebenza, kuvela ibhokisi lokwahlukanisa kuphela bese likhiya lapho. ngine-sony netbook ene-i5 namawindi 7.
Phendula u-Diana rojas
Siyabonga ngokuba nale webhusayithi
Wamukelekile, José Luis!
Sawubona, uyazi ukuthi ngine-HP Mini 210 edla ikhanda lami haha ​​ngizamile ngohlelo lwe-linux, nge-unet, i-ultra iso phakathi kwabanye futhi angikwazi ukungena ebhuthini njengoba kusho umuntu, thumela kabusha isikrini umnyama nge-dash ekhanyayo futhi akukho okunye okwenzekayo, ngicela usize !!!!
Sawubona Alejandro! Ngikisela ukuthi uhambise umbuzo wakho ku-blog.fromlinux.net.
Ungakhohlwa ukuchaza yonke imininingwane efanele ukukusiza.
UJose David Bracho kusho
Bangani abahle nginephutha ku-canaima entsha ngiyakutshela ukuthi i-pendrive yami ibhuthwe futhi ine-canaima 4.0 64 bits kodwa lapho ngiqala nge-pendrive isikrini siyacisha bese siqala i-hard disk engikwenzayo ngidinga usizo
Phendula uJose David Bracho
Ngicabanga ukuthi kunokungqubuzana phakathi kwesihloko seposi nokuqukethwe
Ingelosi Camacaro kusho
Ngingavula kusuka kumawindi? Ngifuna ukufaka i-linux futhi ku-canaima efakwe emafasiteleni
Phendula u-Angel Camacaro
NgoBalena Etcher konke kungenzeka, kimi uhlelo oluhle kakhulu lokufaka i-Linux distro.
Ngithole ibhulogi echaza kahle inqubo yokufaka, ngizoyishiya lapha uma kungenzeka kube khona umuntu okuthandayo: https://lareddelbit.ga/2020/01/04/como-instalar-cualquier-distribucion-linux-desde-un-usb/
IPandorga GNU / Linux: i-distro ethokozisayo yaseBrazil yezingane
I-EasyPeasy 1.6 RC iyatholakala: Ubuntu be-netbook yakho